Igodo nke asaa maka ire azụmaahịa na azụmaahịa dị nta | Martech Zone
Mgbe anyị na-enyere nnukwu azụmaahịa na mgbali ahịa ha na ahịa ha, anyị bụ obere azụmaahịa anyị. Nke ahụ pụtara na anyị nwere oke ego na ka ndị ahịa na-ahapụ, ọ dị mkpa na anyị nwere ndị ahịa ndị ọzọ ga-anọchi ha. Nke a na-enyere anyị aka ịhazi usoro ego anyị na-agbanye ọkụ! Ọ bụ ọnọdụ siri ike, n'agbanyeghị. Anyị na-enwekarị otu ọnwa ma ọ bụ abụọ iji kwadebe maka ọpụpụ nke otu onye ahịa na ịbanye na nke ọzọ. Nnukwu azụmaahịa nwere isi obodo iji too ma wuo ya, obere azụmaahịa abụghị.
Yabụ, enwere usoro ọrụ nke obere azụmaahịa ọ bụla kwesịrị iji hụ na ọ na-eme ihe iji na-eduga na-agagharị ma na-atụgharị ndị ahịa! Infusionsoft ejirila ihe omuma ihe omuma a The Big 7: Ihe ọ bụla Small Business kwesịrị ịma banyere Ahịa na Marketing. Igodo 7 maka obere ahia na ahia bu:
Dọrọ okporo ụzọ na ntanetị tinye nyocha na mgbasa ozi.
Capture na-eduga site na ahia kọntaktị kọntaktị maka onyinye.
Na-azụlite atụmanya site n'ịgwa onwe ha okwu site n'oge ruo n'oge.
Gbanwee Ahịa site na ntughari ihe nchọgharị n'ime ndị na-azụ ahịa site na usoro ahịa kachasị mma.
Napụta & Afọ iji mee ka ndị ahịa ọhụrụ ghọọ ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe.
Ndị ahịa Upsell site na izipu onyinye ntinye na ngwaahịa na ọrụ enyemaka.
Nweta Ntughari site na ịjụ ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe ka ha gbasaa gbasara gị na na-akwụghachi ha ụgwọ.
Tags: gbanwee ahịaobi ụtọ ndị ahịazipu ngwaahịandu nduazụlite atụmanyareferralsụgwọ ọrụire ahia na ire ahiaobere azụmahịaSMBokporo ụzọbulie ndị ahịa
Ballparker: Mepụta Atụmatụ na Mfe